Samachar Batika || News from Nepal » आफ्नी पत्निलाई समेत विश्वास गर्दैनन किम !(तस्विरसहीत)
आफ्नी पत्निलाई समेत विश्वास गर्दैनन किम !(तस्विरसहीत)
एजेन्सी। उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन संसारकै सबैभन्दा नि’रंकुश सा’शक मानिन्छन् । उनले सबैका लागी कडा भन्दा क’डा नियम बनाएका छन् । अरु त अरु आफ्नी पत्निका लागी समेत उनले न’जरबन्दको जस्तो कडा नियम बनाएर अधिकांश समय सैनिकको नि’गरानीमा राख्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम द फक्स न्यूज डट कमले लेखेको छ ।
विश्वमै शक्तिशाली आणविक क्षमता भएका शासक किमले यतिसम्म दम’न गरेकी आफ्नी पत्निको जन्मनाम छोडेर रि सोल जू नाम जब’रजस्ती थोपरिदिए जसका कारण उनको माइती पक्षको पहिचान नै पूर्ण रुपमा गुमयो ।
जहाँकी किमले आफ्नी पत्निको हरेक गतिविधिमाथि समेत सेनालाई नै नि’गरानी राख्ने जिम्मा दिए । उनको कसैसँग पनि कुराकानी गर्ने अधिकार पनि कटौती गरिएको छ। उनीमाथी हद पार गरेर मानव अधिकार हनन गर्दै किमले एक शब्द पनि कुनै सञ्चार माध्यममा बोल्न पाउँदिनन् ।
आफ्नी पत्निका लागी समेत उनले न’जरबन्दको जस्तो कडा नियम बनाएर अधिकांश समय सैनिकको नि’गरानीमा राख्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम द फक्स न्यूज डट कमले लेखेको छ ।
प्रकाशित मिति १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०१:५६